Marketing Cloud: Ahoana ny famoronana Automation ao amin'ny Automation Studio hanafatra SMS Contacts amin'ny MobileConnect | Martech Zone
Marketing Cloud: Ahoana no hamoronana automatique ao amin'ny Automation Studio hanafatra SMS Contacts amin'ny MobileConnect
Alatsinainy Martsa 14, 2022 Alatsinainy Martsa 14, 2022 Manash Sahoo
Ny orinasanay vao haingana no nampihatra Salesforce Marketing Cloud ho an'ny mpanjifa iray izay manana fampidirana am-polony eo ho eo izay misy fiovana sarotra sy fitsipika momba ny fifandraisana. Teo am-potony dia nisy a ShopifyPlus fototra miaraka amin'ny Famandrihana recharge, vahaolana malaza sy miovaova ho an'ny tolotra e-varotra mifototra amin'ny famandrihana.
Ny orinasa dia manana fampiharana fandefasana hafatra amin'ny finday izay ahafahan'ny mpanjifa manitsy ny famandrihana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra (SMS) ary nila nafindra tany amin'ny MobileConnect ny fifandraisany amin'ny finday. Ny antontan-taratasy momba ny fanafarana fifandraisana finday ao amin'ny MobileConnect dia:
Mamorona famaritana import in Contact Builder.
Mamorona automatique amin'ny Studio Automation.
Ampio hetsika fanafarana mankany amin'ny automation.
Rehefa manamboatra ny hetsika fanafarana ianao dia fidio ny famaritana import noforoninao.
Fandaharana ary ampio ny automation.
Toa dingana 5 dingana tsotra izany, sa tsy izany? Ny zava-misy dia sarotra lavitra izany ka nanapa-kevitra izahay ny hanoratra sy hizara izany eto.
Dingana amin'ny antsipiriany amin'ny fanafarana mandeha ho azy ny fifandraisanao amin'ny Marketing Cloud Mobile amin'ny MobileConnect amin'ny fampiasana Studio Automation
Ny dingana voalohany dia ny famoronana famaritana fanafarana ao amin'ny Contact Builder. Ity misy fizarazarana ny dingana hanaovana izany.
Mamorona famaritana import in Contact Builder by clicking on mamorona bokotra ao amin'ny Contact Builder > Imports.
Select List toa anao Tanjona tanjona karazana improt tianao hatao.
Select Import Source. Nisafidy ny hanafatra avy amin'ny vonjimaika izahay Fanitarana data izay nofenoina mialoha miaraka amin'ny angona.
Famantaranandro Select List ary Fidio ny lisitrao (Raha ny momba anay, ny Contacts rehetra - Mobile).
Ireo mpifandray ireo dia nisafidy avokoa ary afindranay any amin'ny MobileConnect izy ireo, noho izany dia tsy maintsy Ekenao ny Politika Fanamarinana Mifidy.
Sarintany ny tsanganana lisitra fanafarana anao (namorona ny Fanitarana data miaraka amin'ny fifandraisana ContactKey efa napetraka).
Lazao anarana ny hetsikao ary fidio ny anao Kaody SMS ary SMS Keyword.
Hamafiso ny mpamosavy ary tsindrio farany mba hitahiry ny asanao vaovao. Ataovy azo antoka ny manampy ny adiresy mailakao ho an'ny fampahafantarana mba hampandrenesina anao isaky ny misy ny fanafarana miaraka amin'ny valiny.
Voatahiry izao ny famaritana fanafarana anao ary azonao atao ny manondro azy ao amin'ny Automation izay hamoronanao Studio Automation.
Ny dingana hamoronana automatique amin'ny Studio Automation tsy dia mazava loatra. AZA mampiasa ny Hetsika fanafarana rakitra. Mitadiava ny SMS Activity izay ahafahanao manampy ny hetsika amin'ny fampiasana ny Manafatra SMS Contact Activity.
Ampio hetsika fanafarana mankany amin'ny automation amin'ny fisafidianana ny famaritana fanafarana noforoninao tamin'ny dingana 8 etsy ambony. Mila manitatra ny SMS lahatahiry aiza no ahitanao ny anao famaritana import.
Fandaharana ary ampio ny automation. Rehefa mandeha ny automatique-nao, dia hafarana ny fifandraisanao amin'ny finday ary hampahafantarina anao amin'ny adiresy mailaka amin'ny dingana faha-8.
Raha mila fanampiana ianao dia aza misalasala mifandray aminay Highbridge. Nanao fampiharana betsaka sy fifindra-monina avy amin'ny sehatra varotra finday hafa mankany amin'ny Mobile Cloud izahay.
Tags: studio automationmpanamboatra fifandraisanafanalahidin'ny fifandraisanamamorona famaritana fanafaranafanitarana datasarintany sahafamaritana importmanafatra lisitramanafatra lisitra findaymanafatra mpanjifa findaymanafatra hetsika fifandraisana smsrahona marketingfifandraisana findaymobile studiomobileconnectpolitika fanamarinana opt-inrechargerecharge famandrihanasalesforcesfmcShopifyPlusSMSkaody smssms teny fanalahidytanjona tanjona
Manash dia manana traikefa 30 taona mahery amin'ny famolavolana, fampitomboana ary fampidirana rindrambaiko ho vahaolana amin'ny serivisy. Amin'ny maha mpiara-manorina sy mpiara-miasa amin'ny Highbridge, Manash dia tompon'andraikitra amin'ny fanombanana sy fampivelarana ny mpanjifany sy ny talenta fampandrosoana anatiny, ny laharam-pahamehana sy ny fampiharana ny vahaolana mandeha ho azy, ary ny fampivoarana ny fampidirana sarotra sy azo esorina.
Nahoana no zava-dehibe ny fanadiovana data ary ahoana no ahafahanao mampihatra ireo dingana sy vahaolana momba ny fahadiovana